HomeBank, gadzirisa yako mari paLinux | Linux Vakapindwa muropa
HomeBank, gadzirisa yako mari paLinux
Shandisa mari Icho hachisi chinhu chakareruka zvisinei nekuti chingaite seicho, uye chokwadi ndechekuti mumba mune zvisingaverengeke zvemari zvinoshandiswa izvo mukufamba kwenguva zvinogona kuomesa zvinhu zvishoma. Kwete zvakanyanya izvo zvakakura zvekushandisa nekuti tinazvo kwazvo mune yedu yegore, yemwedzi kana yevhiki bhajeti, asi asi izvo zvidiki, izvo zvinozivikanwa se ant ind cost, uye ndizvo zvatinoita kana tiine kofi, tichitenga zviwitsi, zvinhu zvishoma muchitoro chehardware kana musupamaketi, uye nekuda kwechikonzero ichocho tinoda kutaura nezve Mari yekushandisa inonzi HomeBank.
Ndicho muchinjiro wepuratifomu application iyo yakagadzirirwa nedonzvo rekuita kuti zvive nyore kune vashandisi kubata mari yemunhu kana yemhuri, kuburikidza nezvimwe zvinobatsira zvakadai semagrafu (Ndiani asingade girafu yakanaka yekufungidzira mari?), mafirita uye zviyero. Munguva pfupi yapfuura kwakauya iyo vhezheni 5.1.2 yeHomeBank, umo mavakawedzera maumbirwo mashoma uye kugadzirisa mashandiro, uye nezvavanoita basa re chengetedza mari yemumba nezvinhu zvakanaka sekuzviverengera wega cheki uye kubhadhara, tsigiro yemhando dzakasiyana dzeakaunzi (bhangi, mari, zvinhu, makadhi echikwereti, nezvimwewo) uye zvikamu.
Semuenzaniso, mukati Bhangi repamba 5.1.2 ikozvino iko kurangarira kunorangarira saizi yemakoramu pachiratidziro chikuru kuti ikurumidze kugadzirwa kwemabhajeti, uye zvakare inoita zvimwe chete neayo rondedzero yemari inotarisirwa. Pamusoro pezvo, iwe unogona ikozvino kugadzirisa mazuva ezvakawanda zvekutengesa panguva imwe chete, uye zviripo rutsigiro rweQuicken Shanduko Fomati (QIF), iyo inoshandiswa neimwe yeanonyanya kukwikwidza maapplication muchikamu. Muchitima ichi, mune zvakare rutsigiro rwekununura magwaro eOpen Financial Exchange (OFX) mumamemo kana kubhadhara uye vabatsiri vekutora zvikwereti zvemari zvakagadziridzwa, senge mutengo wekuchengetedza mota yako.
Mamwe madhiragi kubva mushanduro dzakapfuura anogadziriswazve, senge pakange pasina chikamu chedhesimari mumari yacho mune zvimwe zviitiko, kana pawakada kusarudza kwaiendwa nekutamisa uye kukosha kwekusawanikwa. Chero zvazvingava tinazvo iyo changelog yeapplication kuti tione zvese zvitsva zvasvika, asi chokwadi ndechekuti isu tiri kutarisana neiyo yakakwana kwazvo uye yakasimba vhezheni yeimwe yevakakura kwazvo maapps emari, ane anopfuura makore gumi nemasere echiitiko kumashure kwayo, aine vhezheni ye GNU / Linux nemamwe mapuratifomu, uye neshanduro mumitauro makumi mashanu nematanhatu.
Website: Home Bank
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » HomeBank, gadzirisa yako mari paLinux
Nhaurirano nyowani kubvisa FBDEV kubva kuLinux kernel
Mhanya Hofisi 2013 paLinux ine CrossOver 16,